Incwadi evela ku-Amadou Hampâté Bâ to the young - Afrikhepri Fondation
CLowo okhuluma nawe ungomunye wabazalwa benkulungwane yamashumi amabili. Ngakho waphila isikhathi eside futhi, njengoba ungacabanga, wabona futhi wezwa okuningi kuwo wonke umhlaba. Kodwa-ke, ayenzi njengenkosi kunoma yini. Ngaphezu kwakho konke, wayefuna ukuba ngumcwaningi waphakade, umfundi waphakade, futhi nanamuhla ukomela kwakhe ukufunda kunamandla njengasezinsukwini zokuqala.
Waqala ngokuzifuna ngaphakathi kwakhe, ezama ukuzitholela futhi azi kahle, ukuze aze azibonele kumakhelwane wakhe futhi amthande ngokufanele. Ungathanda ukuthi ngamunye wenu enze okufanayo.
Ngemuva kwalesi sifuna esinzima, wathatha izinyawo eziningi emhlabeni jikelele: i-Afrika, i-Near East, i-Europe, i-America. Njengomfundi ngaphandle kwezinkimbinkimbi noma ubandlululo, wancenga ukufundisa kwabo bonke othisha nabahlakaniphileyo abanikezwa ukuhlangabezana nabo. Waqala ukulalela ukubalalela. Wabhala ngokwethembeka izitatimende zabo futhi bahlaziya ngokucophelela izifundo zabo, ukuze baqonde izici ezihlukene zamasiko abo futhi, ngokufanayo, izizathu zokuziphatha kwabo. Ngamafuphi, njalo wayezama ukuqonda amadoda, ngoba inkinga enkulu yokuphila yi-UKUTHUTHUKISWA KWEZINDABA.
Vele, noma ngabe ngabantu, izizwe, izinhlanga noma amasiko, sonke sehlukile komunye nomunye; kepha sonke sinokuthile okufana nakho futhi, futhi yilokhu okufanele sikubheke ukuze sikwazi ukuzibona komunye futhi sixoxisane naye. Lapho-ke umehluko wethu, esikhundleni sokusihlukanisa, uzoba ukuhambisana nomthombo wokunothisa bobabili. Njengoba nje ubuhle bukakhaphethi busemibala ehlukahlukene, ukwehluka kwamadoda, amasiko nempucuko kwenza ubuhle nokunotha komhlaba. Yeka ukuthi kungaba yisidina futhi okuyisidina kanjani umhlaba ofanayo lapho wonke amadoda, enziwe imodeli efanayo, engacabanga futhi aphile ngendlela efanayo! Njengoba kungekho okunye ongakuthola kwabanye, umuntu angazicebisa kanjani?
Esikhathini sethu esiningi kakhulu esongelwa yizo zonke izinhlobo, amadoda akufanele agxile kakhulu kulokho okuhlukanisayo, kodwa ngalokho abanayo, ngenkathi ehlonipha ubunikazi bomuntu wonke. Ukuhlangana nokulalela abanye kuvuselela njalo, ngisho nokukhula komuntu siqu, kunokungqubuzana okuyinyumba noma izingxoxo zokubeka iphuzu lomuntu siqu. Inkosi endala yase-Afrika yathi: "kukhona" iqiniso lami "nelithi" lakho ", elingeke lihlangane. "IQINISO liphakathi. Ukuze usondele kuso, wonke umuntu kufanele akhulule iqiniso elincane "lakhe" ukuze athathe isinyathelo kuya komunye ...
Izinsizwa, zokugcina ozalwa kwekhulu lamashumi amabili, uhlala ngesikhathi kokubili okwesabisayo yi izinsongo zayo esintwini futhi kujabulise amathuba ivula endaweni yolwazi kanye ukuxhumana phakathi amadoda. Isizukulwane sekhulu leshumi nambili sizobhekana nokuhlangana okumnandi kwezinhlanga nemibono. Kuncike ekutheni kubonakala kanjani lokhu, kuzoqinisekisa ukuthi kusinda noma kubangele ukubhujiswa yizingxabano ezibulalayo. Kuleli zwe lanamuhla, akekho ongasabela embhoshongweni wakhe wendlovu. Zonke izici, kungakhathaliseki ukuthi ziqinile noma zibuthakathaka, zicebile noma zihluphekile, manje zithandana, uma zikhona ngokwezomnotho noma zibhekene nezinhlekelele zempi yamazwe omhlaba. Kungakhathaliseki ukuthi bayayifuna noma cha, lawo madoda asesigabeni esifanayo: isiphepho senyukela, futhi wonke umuntu uzosongelwa kanyekanye. Akukuhle yini ukuzama ukuqonda omunye nomunye nokusizana ngaphambi kokuphuza kakhulu?
Ukubambisana kwamanye amazwe kubeka ukubaluleka okubalulekile kwamadoda namasiko. Namuhla, isintu sinjengomshini omkhulu lapho sisebenzisana nalolu chungechunge: uhlamvu ngalunye, olukhulu noma oluncane, lunendima eqondile okumele idlale engenza isimo sisebenze ngokusheleleka kwefektri yonke.
Njengamanje, njengomthetho, izivimbela zentshisekelo ziphikisana nezinyembezi. Kungenzeka kube kuwe, abantu abasha, ukuletha kancane kancane isimo esisha sengqondo, okugxilwe ngokwengeziwe kokuhambisana nokubambisana, kokubili ngabanye kanye nakwamanye amazwe. Lokhu kuyoba isimo sokuthula, ngaphandle kwalokho okungabe kungabikho ukuthuthukiswa.
Impucuko yendabuko (ngikhuluma ngokuyinhloko nge-Afrika eningizimu yeSahara, engiyazi ngokuqondile) ingaphezu kwayo yonke impucuko yomthwalo wemfanelo kanye nobumbano kuwo wonke amazinga. Ngaphandle kwalokho kwakungumuntu onoma yiluphi uhlobo olulodwa. Akukaze kube khona owesifazane, ingane, isiguli noma indoda endala eshiyiwe ukuba iphile emaphethweni omphakathi, njengengxenye ehlangene. Wayehlala etholakele indawo emndenini omkhulu wase-Afrika, lapho ngisho nomfokazi wesifundazwe etholakele indawo yokulala nokudla. Umoya womphakathi kanye nomqondo wokuhlanganyela okwabongamele bonke ubudlelwane bomuntu. Isidishi selayisi, noma kunjalo, sasivulekile kubo bonke.
Indoda ekhonjiswe ngezwi lakhe, elingcwele. Ngokuvamile, izingxabano zazixazululwe ngokuthula ngenxa ye "palaver": "Ukuze uhlangane ukuze uxoxe, kusho i-adage, ukubeka wonke umuntu kalula futhi ugweme ukuhlukana". Abaphenyi abadala, abahlonishwayo, babheke ukugcinwa kokuthula emzaneni. "Ukuthula! "Ukuthula kuphela! Ingabe amafomula ayisihluthulelo kuzo zonke izibingelelo zomkhosi zase-Afrika. Enye yemigomo emikhulu yokuqalwa kanye nezinkolo zendabuko kwakuwukuthengwa komuntu ngamunye wokuzithiba nokuthula kwangaphakathi ngaphandle kokungekho ukuthula kwangaphandle. Kuwukuthula kuphela futhi ngokuthula umuntu angakha futhi athuthukise umphakathi, kuyilapho izidumbu zempi ezinsukwini ezimbalwa sekuye kwakhiwa amakhulu eminyaka!
Indoda yayibhekwa njengesibopho sokulingana kwezwe lemvelo elizungezile. Wayenqatshelwe ukusika isihlahla ngaphandle kwesizathu, ukubulala isilwane ngaphandle kwesizathu. Umhlaba wawungeyena impahla yakhe, kodwa idiphozi engcwele eyayinikezwe nguMdali futhi ayengumphathi kuphela. Nasi umbono owenza konke okushoyo namuhla uma umuntu ecabanga ngokukhanya lapho amadoda esikhathi sethu akhipha khona ingcebo yeplanethi futhi abhubhise ukulingana kwawo kwemvelo.
Yiqiniso, njenganoma yimuphi umphakathi wesintu, umphakathi wase-Afrika nawo wawuneziphambeko zawo, ngokweqile kanye nobubuthakathaka bawo. Kuwe, izinsizwa nezinsizwa, abantu abadala besasa, ukuthi kuzodingeka ukuthi imibono ehlukumezayo iphele, ngenkathi ekwazi ukulondoloza izimiso zendabuko ezinhle. Ukuphila komuntu kufana nomuthi omkhulu futhi sonke isizukulwane sifana nomgadi wensimu. Umlimi wezithelo ezinhle akusiyo osihluthulayo, kepha lowo, lapho kufika isikhathi, uyazi ukuthi angathatha kanjani amagatsha afile futhi, uma kunesidingo, uqhubekele emabhodini asebenzayo ngokuhlakanipha. Ukusika i-trunk kungaba ukuzibulala, ukulahla ubuntu bomuntu siqu nokuvumela ngokuvumelana nabanye, ngaphandle kokuphumelela ngokuphelele. Nalapha, ake sikhumbule isikhangiso esithi: "Uhlaka lwokhuni lube lukhulu emanzini, lungase luqhube, kodwa ngeke lube yi-caiman!
Yibani, bantu abasha, lo mlimi omuhle owaziyo ukuthi ukukhula phezulu nokusabalalisa amagatsha kuzo zonke izikhala zesikhala, isihlahla sidinga izimpande ezijulile futhi ezinamandla. Ngakho-ke, zigxile ngaphakathi kini, nizokwazi ngaphandle kokwesaba futhi ngaphandle kokulimala ukuzivulela ngaphandle, kokubili ukunikeza nokwamukela.
Kulesi umsebenzi omkhulu, amathuluzi amabili kudingeka: kuqala, le ushona kanye nokulondolozwa kanyoko ngezilimi, imoto Irreplaceable of amasiko ethu ethize; Khona-ke, ulwazi esiphelele ulimi njengefa kusukela ikoloni (ngathi isiFulentshi), njengoba nje Irreplaceable, hhayi kuphela ukuvumela amaqembu ahlukahlukene Afrika yobuhlanga ukuxhumana bese ukwazi, kodwa futhi ukuvula kuze kube ngaphandle futhi sivumele ukuba sihlanganyele namasiko emhlabeni jikelele.
Abantu abasha abavela e-Afrika nasezweni, ikusasa lalifuna ukuthi ekupheleni kwekhulu leminyaka lemashumi amabili, ekuqaleni kwenkathi entsha, unjengebhuloho eliphonswe phakathi kwamazwe amabili: lokho okwedlule, lapho imiphakathi endala khona zifisa ukuzithumela ingcebo yabo ngaphambi kokunyamalala, kanye nekusasa, egcwele ukungaqiniseki nezinkinga, ngokuqinisekile, kodwa futhi zigcwele izinto ezintsha nokuhlangenwe nakho okuthakazelisayo. Kuyinselele yakho futhi ukuqinisekisa ukuthi, mutilating non-sekungaphezu kwamandla ethu, kodwa ukuqhubeka serene kanye kokukhulelwa inkathi ezinye.
Esikhathini esivunguvungu esizokuthwala, khumbula izindinganiso zethu zakudala zomphakathi, ubumbano nokuhlanganyela. Futhi uma unenhlanhla ngokwanele yokuba nesidlo selayisi, ungadli yedwa. Uma izingxabano zisongela wena, khumbula ubuhle bezinkhulumomphendvulwano kanye ne-palaver!
Futhi uma ufuna ukusebenzisa, esikhundleni kokuchitha wonke amandla akho ukuze umsebenzi luhlanzekile futhi abakhiqizi, cabanga emuva Mother Earth, ingcebo yethu kweqiniso kuphela, walinika zonke ukunakwa kwakho ukuze sikwazi ukudweba okwanele ukondla bonke abantu. Ngamafuphi, yiba sevisi yokuPhila, kuzo zonke izici zayo!
Abanye bakho bangathi, "Kukhulu kakhulu ukucela kithi!" Umsebenzi onjalo ungaphezu kwethu! " Vumela ikhehla ukuthi ngikutshele imfihlo: njengoba nje kungekho moto "omncane" (konke kuya ngesimo kaphethiloli ohlangane nakho), akukho mzamo omncane. Yonke imizamo ibalulekile, futhi awusoze wazi, ekuqaleni, kusukela kwesiphi isenzo esibonisa ukuzithoba okuzovela emcimbini esizoshintsha ubuso bezinto. Khumbula ukuthi inkosi yezihlahla ze-savannah, i-baobab enamandla futhi ebabazekayo, ivela embewini ekuqaleni ebingeyona enkulu kunobhontshisi wekhofi.
I-Amkoullel, ingane kaPhuli
Okusha okungu-12 kusuka ku- € 7,20
Kusetshenziswe okungu-20 kusuka ku-2,87 €
Thenga i- € 8,50
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 1, 2021 1:49 PM
isigaba ABANTU BASE-AFRICAN NEMAGA
Into ethonya ukuthinta into - Imibhalo (2016)
Lokho AbaNtshonalanga Abakulahla (Ingxenye 2)
Inkulumo ngobukoloni (Kindle)